Esihlokweni odlule sakhuluma yokuthi ifilimu bubble polyethylene isetjentiswe ngempumelelo njengendlela material emaphaketheni emikhakheni ehlukahlukene. Manje thina khanyisa you ngendaba isicelo Miracle ifilimu kwezinye izici zokuphila kwethu womuntu - ezolimo.
Enye ukusetshenziswa eyinhloko emoyeni-bubble ifilimu kwezolimo ke kungenziwa ngokuthi ukufukamela izidleke kanye zokugcina. Glass ozimele ukuthi yayikade uvikelekile abamba ukushisa esindayo futhi kuyabiza, manje awayona njengoba othandwayo ngaphambili. Faka ingilazi Uhlaka akulula, kodwa ingilazi ngokwayo ngokuvamile ishaya ngenxa yezizathu ezihlukahlukene, ezintweni ezehlukene silethwe umoya, isichotho, isici abantu. Ukuvela ofanelekayo futhi kulula impahla isifulelo zokugcina izithombo zokugcina izithombo - ungqimba elilodwa bezinhlamvu impahla polyethylene ifilimu futhi akusho ukuxazulula izinkinga eziningi. Ngaphansi ifilimu abavamile ukubanda ngisho kuka ngaphansi ingilazi, ifilimu idabukile futhi ulahlekile ke isikhathi esithile noma izinkathi zonyaka ezimbili.
Air bubble ifilimu sihamba isamba elanele imisebe ultraviolet ku abamba ukushisa futhi igcina njalo lokushisa air ngaphakathi abamba ukushisa, ekuvimbeleni izitshalo nqabela aqine. Ngisho abavamile bubble ucwecwe nge Bubbles kokuba ububanzi 25 mm kanti ukuphakama 8 mm, has ukwahlukanisa efanayo ungqimba ngezitini. Nge isisindo kuqhathaniswa ingilazi namandla ephakeme njengoba kuqhathaniswa nge ifilimu olulodwa-ungqimba polyethylene kuyinto ngesikhathi esifanayo, izikhathi 80 kuphumelela ngaphezu ingilazi, nezikhathi 120 kuphumelela ngaphezu abavamile polyethylene ifilimu uyobavikela izithombo zakho itshalwe abamba ukushisa noma Glasshouse kusukela abandayo ngokusebenzisa ukwahlukanisa enkulu eyinqaba kuso. Njengoba empeleni, ngokuhambisana nohlobo isakhiwo njengohlobo oluthile ingilazi, okwenza kube lula futhi nezimo ingilazi nangokuvikela. Operating lokushisa ububanzi kusukela lokususa 60 plus 80 degrees lapho ungakwazi ukugcina izakhiwo zabo ivumela ibhamuza ifilimu thembeke ukuvikela okuqukethwe hothouses kanye izidleke nokushintshashintsha kwezinga lokushisa.
Ngaphezu kwalokho, uma yakhiwa umoya-bubble ifilimu iqukethe ekhethekile ukukhanya sinjalo izithasiselo okuyinto ngcono izakhiwo zalo, ukuvimbela nokwehliswa kwesithunzi polyethylene ukuchayeka emisebeni ultraviolet ngakhoke yelule ukusetshenziswa kwaso ngaphandle kuya eminyakeni emihlanu, ukusetshenziswa unyaka wonke. Kucatshangwa ngakho konke lokhu okufana air bubble ifilimu okuhambisa abangamaphesenti angu-82 emisebeni yelanga eyingozi adingekayo ukuze ikhule ezinhle futhi fruiting izitshalo ngatshala, kufanele kuphawulwe ukuthi ingilazi uchitha elangeni kakhulu. Ofanayo okufakiwe ukukhanya-ekhethekile elikhona greenhouse ifilimu okhethekile iguqula ilanga ukukhanya futhi aqede izingxenye emisebeni zazo kabi nomthelela simila. Enye okufakiwe ewusizo e-greenhouse ifilimu ingase ibizwe ngokuthi okufakiwe ekhethekile hydrophilic (Antifog), it is eziqukethwe ungqimba engaphakathi ibhamuza ifilimu ezinjalo. Kwakheka Laphezu engaphakathi zokugcina izithombo hothouses amathonsi amanzi amaningi olujiyile ibe imbangela ukunciphisa transmittance ukukhanya. Ngaphezu kwalokho amaconsi amanzi phezu ifilimu ukugxila imisebe yelanga, okubangela lokho okubizwa ngokuthi "lens umphumela" elibangela ukushaqeka ezishisayo of izitshalo. Antifog kudambisa kumiswa amaconsi amanzi amaningi condensate, kuqinisekisa iyunifomu ukusakazwa kwezindaba amanzi phezu ifilimu ungqimba elincanyana. Amanzi isakazwa nombala ebusweni ifilimu futhi kancane kancane ogeleza phansi emhlabathini futhi ngaleyo ndlela kunciphisa amathuba izitshalo yilanga ekuqedeni okuthiwa "lens umphumela".
Okunjalo emoyeni bubble ifilimu isetshenziswa njengoba ukutshala ezimbonini imifino nezithelo, futhi ikakhulu ukusetshenziswa ekhaya izingadi. Uma usebenzisa i-ifilimu emoyeni-bubble nazo zonke lezi izithasiselo abamba ukushisa yakhe, umphumela izimo ezivuna isitshalo ukukhiqiza zingandiswa ngu cishe amabili izikhathi, futhi izinga izithelo yokuvuthwa ku Evikini elilodwa noma amabili.
Engxenyeni ezandulele zalolu saxoxa mayelana nokusebenzisa umoya bubble ifilimu upakisha kanti kwezolimo. Esihlokweni esilandelayo sizoxoxa nezinye UTJHAPHISA izicelo ibhamuza.
I-TDT-40 - umkhulu-mkhulu wemishini yokuloba
Ngubani yena, owesifazane wangempela yesimanje yendlu?
Tiles phansi ngaphansi kwesihlahla: izici eziyinhloko, ububanzi
Emizileni Ecological e enkulisa ubusika - kungcono ngempela!
Indlela ukupheka pasta "Carbonare" ekhaya